किर्तिपुरमा कांग्रेसले अग्रता लिँदा एमालेको के छ अवस्था ? « Nipolnews
किर्तिपुरमा कांग्रेसले अग्रता लिँदा एमालेको के छ अवस्था ?
काठमाडौं ३१ वैंशाख ।
काठमाडौंको किर्तिपुर नगरपालिकामा नेपाली कांग्रेसले आफ्नो अग्रता लिएको छ । गएराति देखि नै मतगणना गन्न थालिएको हो । अहिले सम्म एक हजार मत गणना हुँदा नेपाली कांग्रेसले आफ्नो अग्रता कायम राखेको हो ।
कीर्तिपुर नगरपालिकामा मयेरका उम्मेदवार राजकुमार नकर्मीले ४२७ प्राप्त गर्दा प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका केशरत्न बज्राचार्यले भने २८० मत पाएका छन् ।
त्यसैगरी ,माओवादी केन्द्रका शिवशरण महर्जनले ११७ र एकीकृत समाजवादीका बटुककृष्ण थापाले मात्र २२ मत पाएका छन् ।
यो पनि भरतपुरमा आफै हिँड्न सक्ने र देख्न सक्ने आमाबाबुकाे मतदान छाेराले गरिदिए : भरतपुर महानगरपालिका-७ स्थित कृष्णपुर माध्यमिक विद्यालयको ‘ग’ मतदान केन्द्रमा छाेराले आमाबाबुकाे मतदान गरेका छन् । भरतपुर-७ का वडा सदस्य राजेन्द्र तामाङले आमाबुबा आफै हिँड्न सक्ने र देख्न सक्ने हुँदा पनि आफू जनप्रतिनिधि पनि भएको भन्दै दुवैकाे मतदान उनैले गरेका हुन् ।